Suspension mwekota Manufacturers, Suppliers - China Suspension mwekota Factory
Suspension clamps maka ejima jumper eduzi
Katalọgụ Mba Kwesịrị maka eriri dayameta Isi akụkụ （mm） akọwapụtara ọdịda ọdịda （KN） Arọ （kg） L1 L2 CR h ∅ M XTS-1 18 ~ 24 200 50 19 13 57 18 16 70 4.5 XTS-2 25 ~ 31 200 56 19 16 62 18 16 70 5,0 XTS-2A 17 ~ 21 200 50 19 11 57 18 16 70 4.5 XTS-2B 21 ~ 27 200 52 19 14 59 18 16 70 5,0 XTS-5 23 ~ 33 200 60 20 17 55 18 18 100 4,2 XTS-6 34 ~ 45 ...
Suspension mwekota J-nko ụdị
Ezubere mwepu nkwusioru maka ntinye na nkwụsị nke eriri anọ LV-ABC na-akwado onwe ya na okporo osisi ma ọ bụ mgbidi. • A na-eji ihe nkedo na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ihe na-eguzogide ihu igwe • Ejiri ya na isi mkpuchi. Enwere ike idozi mpempe akwụkwọ ahụ n'ụzọ na-enweghị mmebi nke mkpuchi mkpuchi USB • Enweghị akụkụ rụrụ arụ • ọkọlọtọ: EN 50483-2 Katalọgụ Mba adabara onye nduzi JSC-1 4 × 16 ~ 35mm2 JSC-2 4 × 50 ~ 120mm2 JSC-3 4 × 50 ~ 70mm2 ...
ihe mgbochi nkwusioru maka eriri ABC
XJG usoro adabara aerial electric waya nkwusioru mkpuchi eduzi, ọ na-enye nko nko 、 mgbabere uzo ụdị na mbupụ ụdị maka ọrụ。
NYLON-nkwusioru-mwekota maka ABC USB
1A 1B nkwusioru mwekota na-iji kwụsịtụ onwe na-akwado LV-ABC USB na okporo osisi na gwara mmanụ na-anọpụ iche ozi. Anyị na-eduga emeputa nke NFC Type Suspension mwekota na usoro nke n'ichepụta bụ Ọgwụ na ịkpụzi, ihe eji mee bụ UV eguzogide ọgwụ Glass dejupụtara naịlọn, uru ngwaahịa nwere na n'ihi na ọ bụ mere nke plastic ọ bụ n'ụzọ zuru ezu gwara mmanụ na-enweghị ihe ọ bụla rụrụ akụkụ , Enwere ike ijide eriri site na ndozi nke ihe nkwụghachi ụdị. Okwu mmeghe ...
Suspension mwekota (ụdị trunnion)
XGU usoro trunnion ụdị achọkarị ịna ígwè nkwusioru mwekota / electric osisi mwekota na-bụ-eji maka efefe eletriki akara, suspending eduzi na insulator ma ọ bụ àmụmà eduzi na oriọna ụlọ elu site na njikọ oyiyi akwa. Ihe mejuputara ya bu ihe aluminom, nke nwere obere ihe nke magnetik hysteresis & eddy ugbu a tinyere oke oku & ntinye di mfe. Ọ banyela na njirisi nke nchekwa nchekwa na mbelata ikike maka nwughari okporo ụzọ steeti China. Mgbe ole ...
Ejiri okpukpu abụọ na-ejide ihe mgbochi na-eme ka ihe nkedo na-eme ka ọ bụrụ nke aluminom, a na-eji igwe anaghị agba nchara, akụkụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ. (1) The overhanging n'akuku nke nkwusioru mwekota bụ ihe na-erughị 25 Celsius. (2) Okirikiri nke curvature nke overhanging clip clip agaghị abụ ihe na-erughị ugboro 8 nke dayameta nke waya arụnyere. (3) Ike na-ejide nke eriri waya nkwusioru na wires dị iche iche na pasent nke te ...
nkwusioru mpempe akwụkwọ XG 4022
Suspension mwekota （ụdị bag） The nkwusioru waya clip bụ tumadi ji na-efefe n'elu ike e ma ọ bụ substations. A na-anọchi waya na onye na-acha ọkụ ọkụ na eriri insulator ma ọ bụ na-eduzi ọkụ ọkụ ahụ n'elu ụlọ elu ahụ site na ijikọta ihe ndị e ji ígwè rụọ.Ọ bụ nke ihe abụọ dị iche iche: ígwè na aluminom alloy. agaghị abụ ihe na-erughị 25, na okirikiri nke curvature ga-erughị ugboro asatọ nke dayameta nke inst ...
nkwusioru mwepu CGH
Suspension Clamp （Envolope ụdị） XGH usoro clamps nkwusioru iji jikọọ ndị na-eduzi insulators. A na-eji ihe eji emechi ahụ na ndị na-edebe ya na alloy aluminium A na-eji igwe anaghị agba nchara igwe eji emechi akụkụ ndị ọzọ. Katalọgụ Mba Adabara Onye Nduzi Dia. （Mm） Akụkụ ndị bụ isi (mm) akọwapụtara Ọdịda Mbupu (kN) Ibu (kg) HCMRL XGHICGH) -2 5.1-12.5 52.5 25 16 18.0 166 40 1.0 XGHICGH) -3 12.4-17 50 .. .